Nguva Nevamwe Shamwari - Izwi Foundation
"Nguva neShamwari" ndeye Q & A chimiro che The Word magazini. Pakati pe1906 ne1916, mibvunzo iri pasi apa yakabvunzwa nevadzidzi ve The Word uye yakapindurwa naVaPercival pasi pezita rokuti "SHAMWARI." Nekufamba kwenguva, tafunga kuisa zita rake semunyori wemhinduro.
Muna 1986, The Word Foundation yakagadzira chikamu chetatu che The Word ichiri kubudiswa. Iyo zvakare ine "Nguva Neshamwari" chikamu chine mibvunzo kubva kuvaverengi vedu uye mhinduro kubva kuvadzidzi venguva refu.
Verenga Nguva Neshamwari
Dzvanya pamazuva emwedzi pazasi kuti uwane mhinduro kumibvunzo yese yakanyorwa pasi peiyo zuva.
Dzvanya pamubvunzo kuenda kumhinduro kumubvunzo uyu.
Click on PDF yekudzokorora kwechimiro chepakutanga.
• Tinogona sei kutaura izvo zvatiri muiri yedu yekupedzisira?
• Tinogona kutaurira kuti takazvarwa kakawanda sei?
• Isu tinoziva here pakati pekuzvarwa kwedu patsva?
• Ndedzipi pfungwa dze theosophical dzekuzvarwa kwaAdamu naEva?
• Ndeipi urefu hwenguva yakatarwa pakati pekuzvarwa patsva, kana paine chero nguva yakatarwa?
• Isu tinochinja hunhu hwedu kana tadzokera pasi pano?
• Ko Theosophist anotenda mashura here?
• Ndeipi nheyo iripo yekutenda mashura iyo munhu akazvarwa aine "caul" angave aine humwe hunyanzvi hwemashura?
• Kana pfungwa inogona kupfuudzwa kune imwe pfungwa, nei izvi zvisingaitwe nenzira kwayo uye nehungwaru hwakawanda sekukurukurirana kunoitwa nguva dzose?
• Tine chero chinhu here chinoenderana nemafambisirwo ehunyanzvi hwekufunga?
• Tinogona sei kutaurirana nekufunga zvinehungwaru?
• Zvakanaka here kuverenga zvinofungwa nevamwe kuti vaizozvifambisa kana kuti kwete?
• Sei zviri nani kuva nemuviri wakacheneswa mushure mekufa panzvimbo yekuuviga?
• Pane humwe chokwadi munyaya dzatinenge taverenga kana kunzwa nezvadzo, pamusoro pemampires uye vampirism?
• Ndeipi chikonzero chekufa kamwe kamwe kwevanhu kana vari vaduku kana muhukuru hwehupenyu, apo zvingaita sekuti makore mazhinji ekubatsira uye kukura, mupfungwa uye mumuviri, ari mberi kwavo?
• Kana ruoko rwechidiki, gumbo, kana imwe nhengo yemuviri isingasunungurwi apo nhengo yemuviri inobviswa, nei muviri we astral usingakwanisi kubereka imwe ruoko rwenyama kana gumbo?
• Ive Theosophist mune zvinomera kana kudya nyama here?
• Ko, theosophist chaiyo angazviona sei anosophist uye achiri kudya nyama kana tichiziva kuti zvinodiwa zvemhuka zvinodzingwa kubva panyama yemhuka kusvika mumuviri weanozvidya?
• Hazvisizvo here kuti yogis yeIndia, nevarume vezvinhu zvinopiwa naMwari, vanorarama pamiriwo, uye kana zvakadaro, havafaniri here avo vanozozvidzivirira pachavo voga kudya nyama uye vachirarama nemiriwo?
• Kutya mimwe miriwo kunobatsira sei pamuviri wemunhu, zvichienzaniswa nekudya nyama?
• Ko zvinodhaka zvinogona sei kudzivirira kukanganisa kwepfungwa apo zvinodhaka zvinenge zvakarayirwa kuitira kuti zvigone kuiswa mumatambudziko?
• Chii chaicho chirevo chezwi rechirevo chezwi, chinoshandiswa muhuwandu hwekubatanidza ne theosophists nemashiripiti?
• Chii chinorehwa neshoko rokuti "human elemental"? Pane kusiyana here pakati pacho nepfungwa dzakaderera?
• Pane pane chekutanga chekutonga zvishuvo, imwe yekudzora masimba anokosha, imwe yekudzivirira mabasa emumuviri, kana kuti munhu wekutanga anotonga zvose izvi?
• Izvo chete izvo zvinotungamira zvekutonga zvose zvirikuziva uye mabasa asingaziviki emuviri?
• Ndezvipi zvinyorwa mumasangano makuru anobuda, uye ivo vose here kana kuti chero chipi zvacho chavo munguva yekushanduka-shanduka kuva varume?
• Ichokwadi here kuti munhu aone munguva yemberi?
• Hazvibviri here kuti munhu aone zviitiko chaiyo zvekare uye zviitiko sezvavanenge vari mune ramangwana zvakajeka uye zvakajeka sezvaanoona zviriko?
• Ndezvipi zvinoita kuti munhu aone zvakajeka kana kuona kwakadaro kuchipikisa zvose zvatinoona?
• Ndezvipi nhengo dzinoshandiswa mu-clairvoyance, uye zvakaratidzwa sei zvinobva kune zvinhu zviri pedo kune avo vari kure, uye kubva kune vanozivikanwa vanoonekwa kune vasingazivikanwi vasingaoneki?
• Ko munhu wemashiripiti anotarisa mune ramangwana pose paanoda kudaro, uye anoshandisa chikwata chechipiri chekuita here?
• Kana munhu wemashiripiti anogona kuvhara chifukidziro nei vasingaiti zvemashiripiti, mumwe nomumwe kana kuti pamwe pamwe vanobatsirwa neruzivo rwavo nezvezviitiko zvinouya?
• Ndeipi "ziso rechitatu" uye anoita kuti chidimbu uye nemashiripiti arishandise?
• Ndiani anoshandisa pineal gland, uye chii chinoshandiswa kushandiswa kwayo?
• Iro ziso rechitatu kana pineal gland rinotanga sei, uye chii chinoitika pamusana akadaro?
• Krisimasi ine chero chinhu chinorehwa kune theosophist, uye kana zvakadaro, chii?
• Zvichida here kuti Jesu aiva munhu chaiye, uye kuti akazvarwa musi weKrisimusi?
• Dai Jesu aiva munhu chaiye nei zvichiitika kuti hatinazve nhoroondo yezvakaitika zvekuberekwa kana hupenyu hwomunhu akadaro kupfuura chirevo chebhaibheri?
• Sei vachidana izvi, 25th yaDecember, Krisimasi pane Jesumass kana Jesuday, kana nedzimwe zita?
• Pane nzira yekutsanangurira kuberekwa uye hupenyu hwaJesu here?
• Iwe wakataura nezvaKristu sechinhu. Unoita musiyano pakati paJesu, naKristu here?
• Ndeipi chikonzero chaicho chiripo chekupemberera zuva reC25th raDecember seyekuzvarwa kwaJesu?
• Kana zvichikwanisika kuti munhu ave Kristu, unozadzika sei uye sei wakabatana neZuva ra 25th raDecember?
• Zvakaipa here kushandisa pfungwa pane nzira dzekuporesa kurwara kwepanyama?
• Zvakanaka here kuedza kurapa zvirwere zvepanyama nokurapwa mupfungwa?
• Kana zvakakosha kuporesa zvirwere zvenyama nemaitiro ekufunga, kugovera zvirwere zvepanyama zvinotangira pfungwa, nei zvakashata kune nyanzvi yepfungwa kana muKristu kuporesa zvirwere izvi nekurapwa kwepfungwa?
• Sei zvakashata kuti masayendisiti epfungwa agamuchire mari yekurapa kwepanyama kana yepfungwa panguva apo vanachiremba vanobhadhara mari yavo yenguva dzose?
• Sei zvisina kunaka kuti musayendisiti wepfungwa agamuchire mari yekurapa zvirwere paanozvipira nguva yake yose kubasa iri uye anofanira kuva nemari yekurarama?
• Ko zvisikwa zvinogona sei kupa munhu anoda chaizvo kubatsira vamwe, asi ndiani asina nzira yekuzvitsigira pachake?
• Ndizvo zvechiKristu nemafungiro masayendisiti asingaiti zvakanaka kana akashandisa kurapwa uko vanachiremba vanokundikana?
• Ndezvipi zvinongoratidzirwa isu semafungiro epfungwa musayendisiti mupfungwa anofanirwa kuva nazvo?
• Nenzira ipi iyo kukwanisa kutevera mumwe wega kana imwe yekushanda kwepfungwa, uye kuona zvechokwadi zvinokonzera, kuratidzira zvirevo zvepfungwa uye christian masayendisiti?
• Ndezvipi zvakaguma zvekugamuchirwa uye tsika dze dzidziso dzechiKristu kana masayendisiti mupfungwa?
• Sei vakawanda vanoporesa mupfungwa vachibudirira kana vasingabatsiri kurapwa, uye kana vasiri izvo zvavanozviratidza ivo, ndizvo here kuti varwere vavo varege kuziva chokwadi?
• Ko Jesu nevakawanda vevatsvene havana kurapa zvirwere zvepanyama nemaitiro ekufunga uye kana zvakadaro zvakanga zvisina kururama here?
• Kana zvakakanganisika kugamuchira mari yekurapa zvirwere zvepanyama nemaitiro ekufunga, kana kuti kupa "dzidziso yesayenzi," hazvisiwo zvakaipa here kuti mudzidzisi wechikoro awane mari yekuraira vadzidzi mune rimwe rematavi ekudzidza?
• (Mutsamba yakanyorerwa mupepeti, March 1907 "Nguva Nevamwe Shamwari" inobvunzwa, inoteverwa nemhinduro kubva kuna Mr. Percival.-Mupepeti.)
• MuKristu anoti Munhu ane Muviri, Mweya neMweya. ITheosophist inotaura kuti Munhu ane Mazano manomwe. Mune mazwi mashomanana ndeiyi Aya Mazano manomwe?
• Mune mazwi mashomanana iwe unogona kundiudza chii chinoitika parufu?
• Vazhinji vezvokunamata vanotaura kuti pamisangano yavo mweya yevakasimuka inoonekwa uye inotaurirana neshamwari. Theosophists vanoti izvi handizvo; kuti izvo zvinoonekwa hazvisi mweya asi shell, spook kana chido chemuviri icho mweya wakarasa. Ndiani akarurama?
• Kana mweya wevanhu ungasungwa musungwa mushure mekufa nemuviri wayo unoda, nei mweya uyu usingaoneki pamisangano uye nei zvakashata kutaura kuti hazvioneki uye zvinotaurirana nevatambi?
• Kana kuonekwa pamisangano ndeye chete mabhomba, mahwendefa kana miviri yenyama, iyo yakasvibiswa nemweya yevanhu mushure mokufa, nei iri kukwanisa kukurukura nevatambi pane imwe nyaya inozivikanwa chete kune munhu ane hanya, uye nei Ndizvo here kuti nyaya imwechete icharehwa kakawanda?
• Ichokwadi hachikwanisi kurambwa kuti mweya dzimwe nguva inotaura chokwadi uyewo inopa mazano iyo kana kutevedzwa ichaguma nekubatsirwa kwevose vanofunga. Ko theosophist, kana kuti chero ipi zvayo inopesana nekunamata, inoramba kana kutsanangurira kunze kwezvinhu izvi?
• Kana iri ichokwadi kuti hapana asi kunze kwehombodo, zviputi uye masangano asingabviri manas anoonekwa, maererano nedzidziso dzeanosophika, pamisangano, kubva kupi kunobuda ruzivo uye dzidziso dzemafirosofi uye anowanzo dzidziso dzouMwari, izvo vamwe vasvikiro vasina mubvunzo vakagamuchira?
• Unoita basa rakafa pachako here kana kuti pamwe chete kuti uwane imwe mugumo?
• Vakafa vanodya sei, kana zvachose? Chii chinotsigira upenyu hwavo?
• Ko vakafa vanopfeka nguo here?
• Ko vakafa vanogara mudzimba here?
• Ko vakafa vakarara here?
• Ko vakafa vanogara mumhuri, mumharaunda, uye kana zvakadaro kune hurumende?
• Pane chirango kana mubairo wezviito zvakaitwa nevakafa, kana muhupenyu kana mushure mekufa?
• Ko vakafa vanowana zivo here?
• Ko vakafa vanoziva zviri kuitika munyika ino here?
• Iwe unotsanangura sei mamiriro ezvinhu apo vakafa vakaonekwa kana muchiroto, kana kuvanhu vakanga vakamuka, uye vakataura kuti kufa kwevamwe vanhu, kazhinji dzimwe nhengo dzemhuri, kwaive pedyo?
• Vakafa vakakweverwa kumitezo yei mhuri yavo paiva pasi pano, uye vanovatarisira; vanoti amai vakasiyiwa pamusoro pevana vavo vaduku?
• Munyika yevakafa pane zuva rimwe chete nemwedzi nenyeredzi sezviri munyika yedu?
• Zvinokwanisika here kuti vakafa vafukidze vapenyu vasina ruzivo rwevapenyu, nekuratidza pfungwa kana mabasa?
• Pane anoziva here iyo nzvimbo iripo iyo iyo zuva redu uye mapurogiramu aro anoita sezviri kuita? Ndakaverenga kuti inogona kunge iri Alcyone kana Sirius.
• Chii chinoita kuti mwoyo womunhu urove; Ndiyo here kudengenyeka kwemafungu kubva kuzuva, uyewo nezvekufema?
• Ndeipi ukama pakati pemwoyo uye zvepabonde zvinoshanda-zvakare kufema?
• Ko mwedzi unorevei kune munhu uye humwe hupenyu pasi pano?
• Zuva kana mwedzi zvinotonga kana kutonga nguva yekudzivirira here? Kana zvisina kudaro, chii?
• Iwe unogona kundiudza here chimwe chinhu pamusoro pemhando yemoto kana murazvo? Yakagara ichiita chinhu chakavanzika zvikuru. Handigoni kuwana ruzivo runogutsa kubva mumabhuku esayenzi.
• Ndeipi iyo inokonzera kupisa kukuru, kwakadai semarimi emvura uye moto unofanirwa kubuda panguva imwechete kubva kumativi akasiyana eguta, uye chii chinopisa moto?
• Zvinhu zvakadai segoridhe, mhangura uye sirivha zvakagadzirwa sei?
• Iwe unotenda mukuongorora nyeredzi seusayenzi here? Kana zvakadaro, inguva yakareba sei iyo inofungidzirwa seyakabatana nehupenyu hwevanhu nezvinodiwa?
• Sei nguva yekuberekwa munyika yepanyama inokonzera kuguma kwehupenyu hwekuzvarwa ikoko?
• Iko nguva yekuberekwa inogadzirisa sei kuguma kwevanhu munyika?
• Izvozvo zvinokanganisa sei pakuberekwa, kana kuti zvichaitika kune munhu, zvinoshanda pamwe ne karma ye ego?
• Ndizvo zvinoshandiswa pamapuraneti zvinoshandiswa kutungamirira karma yevanhu, kana kuti nguva? Kana zvakadaro, kune rusununguko rusununguko runopinda kupi?
• Sei dzimwe nguva ichitaura kuti Jesu aiva mumwe wevadzikinuri vevanhu uye kuti vanhu vekare vainge vanewo vaponesi vavo, pane kuti vaiti ndiye Muponesi wenyika, sezvinoitwa nechiKristudhomu chose?
• Iwe unogona here kutiudza kana pane vanhu vanopemberera kuberekwa kwevadzikinuri vavo pamusoro kana kumativi ose makumi maviri nemashanu zuva raDecember (panguva iyo zuva rinonzi rinopinda chiratidzo cheCapricorn?
• Zvinotaurwa nevamwe kuti kuberekwa kwaKristu ndiko kuberekwa kwemweya. Kana izvi zvikadaro, nei Krisimasi ichichengetwa mumuviri wenyama nekudya nokunwa, nenzira yepanyama, iyo yakasiyana zvikuru nemafungiro edu ekunamata?
• Mu "Nguva Nevamwe Shamwari," yeMuv. 4, peji 189, zvinonzi Krisimasi zvinoreva "Kuberekwa kwezuva risingaoneki rekuedza, Kristu Murairo," iyo, sezvainoenderera mberi, "Inofanira kuberekwa mumunhu." Kana zvakadaro, zvinotevera here kuti Kuberekwa kwaJesu kwaivawo pamakumi maviri nemashanu kubva munaDecember?
• Kana Jesu kana Kristu asina kurarama uye kudzidzisa sezvaanofanirwa kunge aita, sei kuti kukanganisa kwakadai kungave kwakakonzera kwemazana emakore akawanda uye kunofanira kukurira nhasi?
• Iwe unoreva kureva kuti nhoroondo yechiKristu haisi chinhu asi fable, kuti hupenyu hwaKristu ndedzechokwadi, uye iyo yepfupi makore 2,000 nyika yave ichidavira munhema?
• Kana inyanzvi ye astral inokwanisa kuona kuburikidza nenyaya, nei ichiti hapana kutonga kwemweya wepakati kunokwanisa kukwanisa ikozvino inozivikanwa mukuratidza kuenzaniswa kwemuchena?
• Inotsanangudzo ipi iyo Theosophy inopa nokuda kwepasi kudengenyeka kwenyika kunowanzoitika, uye iyo inogona kuparadza zviuru zvevanhu?
• Chii chinonzi chimiro chaMwari kana chimiro cheMunhu Mukuru?
• Chii chinoshandiswa kana basa remuviri wepituitary?
• Chii chinoshandiswa kana basa regeni repaini?
• Chii chinoshandiswa kana basa repleen?
• Chii chinoshandiswa kana kushanda kwetachiona gland?
• Iva nemafungiro evanhu uye vanofunga here?
• Ichave nehuipi huipi hunoshandiswa hunoendeswa kuvanhu kuburikidza nekuvapo kwezvipfuwo zvemhuka?
• Pane imwe nzvimbo yekutaura kwevaya vanoti mweya yevanhu vakabva vakabva kune shiri kana mhuka?
• Iwe unogona here kutsanangura zvakazara zvizere kuti mifungo yakasiana yemunhu inoita sei pane iyo nyaya yepanyika kuti ibudise marudzi akasiyana emhuka dzakadai seshumba, bere, peacock, rattlesnake? (Uyu mubvunzo unoreva mupepeti waPercival. Kufunga- Mupepeti.)
• Munhu anogona kutarisa mukati memuviri wake oona kushanda kwezvikamu zvakasiyana, uye kana zvakadaro sei izvi zvingaitwa sei?
• Mune zvipi zvinyorwa zvinokosha izvo nyika yepasi inopesana nemweya? Aya mazwi anowanzoshandiswa zvakasiyana-siyana mumabhuku nemagazini anobata nyaya idzi, uye kushandiswa uku kunogona kukanganisa pfungwa ye muverengi.
• Nhengo imwe neimwe yomuviri inhengo yakangwara here kana inoita iyo inoshanda kwayo pakarepo?
• Kana imwe nhengo kana chikamu chemuviri wenyama kuchimiridzirwa mupfungwa, saka nei munhu asina maturo asina kurasikirwa nekushandiswa kwemuviri wake apo iye arasikirwa nekushandiswa kwepfungwa dzake?
• Izvo hazviratidzika kuti zvinonzwisisika kuti mibvunzo miviri kana kupfuura inopesana inogona kuva yakarurama pamusoro pezvokwadi. Sei kune mafungiro akawanda pamusoro pezvimwe zvinetso kana zvinhu? Ko isu tichazokwanisa sei kutaura kuti ndedzipi pfungwa yakarurama uye kuti chokwadi ndechipi?
• Sei mabwe anokosha akagoverwa kune mamwe mwedzi egore? Izvi zvinokonzerwa nechimwe chinhu kunze kwekufungidzira kwevanhu here?
• Iine dhamondi kana rimwe dombo rinokosha rinokosha kunze kweiyo inomiririrwa nemitemo yemari here? uye, kana zvakadaro, kukosha kwedhaimani kana rimwe dombo rakadaro kunodini?
• Mweya unoshanda nemunhu uye chii chiri chemweya?
• Hazvina here kutenda kuti vaAtlante vanogona kubhururuka? Kana zvakadaro, kutenda kwakadaro kunorevepi?
• Ndivo ivo vari kuedza kugadzirisa dambudziko rekufamba kwepanyika, vakazvarwazve veAtlantean?
• Dai maAtlantei ainge agadzirisa dambudziko rekufamba kwemazuva, uye kana avo vari iye zvino vane dambudziko rimwechete vaiva vaAtlante, saka nei vanhu ava vasina kuberekwazve kubvira pakunyura kweAtlantis uye isati yasvika, uye kana vakadzoka zvakare nguva yemazuva ano, nei vasina kukwanisa kuziva mhepo kana kuti kubhururuka zvisati zvaitika panguva ino?
• Tiri isu here kana kuti hatisi kubatana neatma-buddhi?
• Hazvisizvo here kuti zvose zvatinokwanisa kuva zviripo matiri uye kuti zvese zvatinofanira kuita ndezvokuti tive nekuzviziva?
• Ima rima kusavapo kwechiedza, kana chimwe chinhu chakasiyana pachako uye chinotora nzvimbo yechiedza? Kana zvakasiyana uye zvakasiyana, chii chiri rima uye chii chiri chiedza?
• Chii chinonzi radium uye sei zvingaita kuti irambe ichirasira nguva dzose nesimba guru pasina chero kuonekwa kusvibiswa nekurasikirwa kwesimba uye muviri wayo, uye chii chinokonzera radioactivity yayo?
• Zvinokwanisika here kukudziridza mhando mitsva yemiriwo, michero kana mbeu, zvakasiyana zvachose uye yakasiyana kubva kune dzimwe mhando dzinozivikanwa? Kana zvakadaro, zvinoitwa sei?
• Zvinokwanisika here uye zvakakodzera kutarisa mune ramangwana uye kufanotaura zviitiko zvemugumo?
• Zvinokwanisika kuisa pfungwa kubva mupfungwa here? Kana zvakadaro, izvi zvinoitwa sei; munhu angaita sei kuti agadzirise kudzoka kwayo uye kuichengeta kubva kunze kwepfungwa?
• Ko iko kuve kweChakavanzika Masangano kune mhedzisiro yekudzosera kana kufambisira pfungwa mukushanduka kwayo? Zvinoita here kuti uwane chimwe chinhu pasina?
• Sei vanhu vachiedza kuwana chimwe chinhu pasina? Vanhu vanoita sei kuti vawane chimwe chinhu pasina, vanofanira kubhadhara pane zvavanowana?
• Chii chakakosha kusiyana pakati peTheosophy uye New Thinking?
• Chii chinokonzera kenza? Pane chimwe chinhu chakazivikanwa kurapwa nacho here kana kuti imwe nzira yekurapa inofanira kuwanikwa musati mushonga wayo unogona kuitwa?
• Sei nyoka ichionekwa nenzira yakasiyana nevanhu vakasiyana? Dzimwe nguva nyoka inotaurwa nezvayo semumiri wezvakaipa, pane dzimwe nguva sechiratidzo cheuchenjeri. Sei munhu ane uhu hwakadaro hwekutya nyoka?
• Pane chokwadi here munhau dzemaRicicrucians dzave dzichipisa mwenje? Kana zvakadaro, vakaitwa sei, vakashandira chinangwa chei, uye vanogona kuita uye kushandiswa zvino here?
• Sei gondo iri kushandiswa sechiratidzo chemarudzi akasiyana-siyana?
• Iko kondo mbiri dzakagadzirwa ikozvino inoshandiswa sechiratidzo chenyika yeimwe nyika, uye inowanikwa pane zviyeuchidzo zvevaHeti vekare vezvinyorwa zveBhaibheri, zvese kune mamiriro ezvinhu evanhu here?
• Pamakona mana uye hafu dzemakona emudenderedzwa pamusoro peMasonic Keystone yeRoyal Arch Chitsauko ndeye mavara HTWSSTKS Ane hukama hweZodiac, uye nzvimbo dzadzo dzakapoteredza denderedzwa dzinoratidzei?
• Chii Chinodiwa Mukudya?
• Anononoka mukudya chero kukosha sekudya kunze kwekudya here?
• Munhu angazvidzivirira sei kune nhema kana kunyomba vamwe?
• Mhuka dzinobata mhuka dzinogara sei pasina zvokudya uye sezviri pachena isina mhepo panguva dzenguva refu dzekurota?
• Ko mhuka ine mapapu inorarama isina kupfurikidza here? Kana zvakadaro, inorarama sei?
• Sayenzi inoziva mutemo upi umo munhu anogona kurarama asina kudya uye mweya; kana zvakadaro, varume vakadaro vakararama, uye mutemo chii?
• Sei nguva yakakamurwa seyoyo?
• Une nguva muzvikamu zvayo mumakore, mwedzi, masvondo, mazuva, maawa, maminitsi nemasekondi chero nyanzvi nehupenyu kana humwe hutano mumuviri womunhu? Kana zvakadaro, chii chinowirirana?
• Munhu angagona kurarama kuburikidza, kupedzisa mabasa, uye kufa kune humwe hupenyu humwe panguva yaakapiwa makore akawanda pasi pano?
• Chinhu chepakutanga, nemashiripiti maitiro, chinounzwa muchikwangwani nenzira nemaoko; kana zvakadaro, ndeapi fomu inogona kubudiswa uye inoitwa sei?
• Maoko aifanira kushandiswa sei mukuporesa muviri wako pachako kana kuti chikamu chemuviri?
• Chii chinodiwa pakukura mukuzvipira?
• Izvo zvii zvinonhuwira, uye zvakashandiswa kwenguva yakareba zvakadini?
• Pane zvipo zvinowanikwa kubva mukupisa kwezvinonhuwira, munguva yekufungisisa here?
• Izvozvo zvinokonzerwa nezvinonhuwira zvinopfuta zvinoonekwa pane chero ipi zvayo ndege?
• Ndeapi mavara, zvigadzirwa nematombo zvinonzi kune mapuraneti manomwe?
• Ko kupfeka kwemavara, zvidhina nematombo zvinofanira kutsanangurwa nemamiriro ezvinhu epasi iro pasi pemunhu akaberekwa akaberekwa?
• Une mavara, zvigadzirwa nematombo chero hupi hwakanaka hwakanaka, uye hunogona sei kupfeka pasina hanya nemapuraneti?
• Ndeapi matsamba kana nhamba dzinowanikwa kana kuti dzakanyorerwa mapuraneti?
• Munhu ane microcosm ye macrocosm, iyo yose mune zviduku here? Kana zvakadaro, mapuraneti uye nyeredzi dzinooneka dzinofanira kusimidzwa mukati maro. Vari kupi?
• Chii chinorehwa neutano huzhinji? Kana iri kuenzana kwemunhu wemuviri, wepfungwa newemweya, zvino chikamu chinoshandiswa sei?
• Zvakakosha here kuti murume abve mumuviri wake wenyama asingazivi, kuti mweya unogona kupinda muhuro hwahwo?
• Mweya inosvika kusvika zvakadini iyo inosiya miviri yavo yenyama nokuziva uye inoramba ichiziva pashure porufu?
• Ndapota ipai tsananguro yekusafa uye utaure muchidimbu kuti kusafa kunogona kuwanika sei?
• Munhu anofarira uye haadi zvido zvemweya wake here? Kana zvakadaro, vanoonekwa sei? Kana zvisina kudaro, vanobva kupi vanofarira uye vasingadi?
• Zvakanakisisa here kuti munhu anofanira kudzivisa zvishuvo zvake zvepabonde, uye anofanirwa kuedza kurarama hupenyu hwekusagadzikana here?
• Chii chinonzi chidzidzo chekudzikinura, uye chinogona kuyananiswa sei nemutemo we karma?
• Chii chinoseka, uye nei vanhu vachiseka?
• Ihwo hupi hukama pakati pemagnetism uye kukuvadza, uye zvakasiyana sei, kana zvachose? Uye ndeipi ukama pakati pemagnetism nemhuka magnetism, uye zvinopesana sei, kana zvachose?
• Mishonga inokonzerwa sei nemagnetism yemhuka?
• Ndeye magnetism, mesmerism, uye hypnotism zvakabatana, uye kana zvakadaro, zvakabatana sei?
• Mhuka magnetism inogona sei kushandiswa, uye inogona kuiswa kupi?
• Chii chinoreva kunhuwa; unoita sei; kuita zvikamu zvepanyama zvinobatanidza mukugadzirwa kwekunzwa, uye chikamu chipi chinonhuwira chinotamba mukurarama?
• Chii chifungiro? Inogona sei kukudziridzwa uye kushandiswa?
• Chii chinonzi chirwere uye chii chinobatanidza mabhakitiriya nacho?
• Chii chinonzi kenza uye chinogona kurapwa, uye kana chinogona kurapwa, chii chirwere?
• Ndeipi nzira yakanaka yekubatanidza hurumende yekumuka uye kurota kuitira kuti pasave nenguva iyo iyo munhu akarara asina chaanoziva?
• Chii chinotikurudzira kutendeukira kune maonero edu? Tinobvumirwa kusvika papi kumirisana nemafungiro edu kune evamwe?
• Ndezvipi zvinetso zvakakonzera zvose zvinoita uye zvinoratidzika hazvigone kugadziriswa munguva yekukwira inofanira kugadziriswa panguva yokurara kana pakarepo pakumuka?
• Chii chiri chiyeuchidzo?
• Chii chinokonzera kurasikirwa kwepfungwa?
• Chii chinoita kuti munhu akanganwe zita rake kana kuti anogara kupi, kunyange chiyeuchidzo chake chisingakanganisi mune zvimwe zvinhu?
• Chii chinowanzoreva izwi rekuti “mweya” uye izwi rekuti mweya rinofanira kushandiswa sei?
• Haisi iyo dzidziso yeTheosophika yekutambura kwedu pasi pano se karmic retribution, maererano neTheological statement yekutambudzika kwedu sekudzorera mugehena, mune izvo zvese zvinotaurwa zvinofanirwa kugamuchirwa nekutenda chete; uye, mberi, imwe inenge yakaita seyeye kuti iite tsika dzakanaka?